Dad Shacab ah oo ku dhintay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dad Shacab ah oo ku dhintay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa qabsaday Garai ay saarnaayeen dad Shacab ah oo marayay deegaanka Xaawa Cabdi ee duleedka magaalada muqdisho,waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in gaari nooca loo yaqaano Hoomey oo ka yimid dhinaca degmada Afgooye uu qaraxa ku qabsaday agagaarka Isbitaalka Xaawa Cabdi,isla markaana ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 Ruux oo gaari saarnaa.
Mas’uuliiin ka tirsan Maamulka deegaanka Ceelasha iyo iyo Ciidamo Boolis ah ayaa gaaray halka qaraxa uu ka dhacay,waxaana la sheegay in badi dadka ku dhintay ay ahaayeen dad ka Ganacsada Khudaarta oo ka yimid degmada Afgooye.
Waxaa jira dhaawacyo ka dhashay qaraxaas,waxaana socda gurmad kala duwan oo dadkaasi loo fidinayo, iyada oo warar kale ay sheegayaan in Goobta qaraxa uu ka dhacay ay yaallaan meydadka dadka ku dhintay qaraxa.
Previous articleDhageyso:-Galmudug oo shaacisay kiisas Cusub oo la xiriira Coronavirus
Next articleDowladda oo sheegtay in howlgal ku dileen Xubno ka tirsan Al-Shabaab